China Jumbo Bag Fibc Bag Full-Automatic Machine manapaka hafanana CSJ-1350 orinasa sy mpanamboatra | VYT
Ity milina fanapahana kitapo lehibe ity dia afaka manapaka ny horonana lamba jumbo, ary manindrona ny lavaka "O" sy "十". Faribolana mamaritra ny fanapahana antsy an-tsipika, famahanana lamba jumbo.
Ny masinina dia mampifangaro ny halavany mandeha ho azy, ny fanapahana, ny fikosehana amin'ny ankapobeny.
Ny masinina dia mampifangaro ny halavany mandeha ho azy, ny fanapahana, ny fikosehana, ny rafitra fanaraha-maso anatiny dia mandray ny PLC, ny milina manapaka dia afaka manapaka ny horonana lamba jumbo, ary manapoka ny "O" lavaka sy "十".
CSJ-1350, CSJ-2200 ary CSJ-2400 dia milina azo ianteherana sy mahomby natao hamokarana takelaka FIBC (Jumbo Bags) ny halavany efa voafaritra miaraka amin'ny mety ho fanapahana profil namboarina ho takin'ny mpanjifa.
1. Rafitra fanaraha-maso afovoany PLC. Fandraisana olona-milina miloko, izay mahatonga ny fametrahana daty, fampirantiana, fandraketana mazava kokoa sy marina kokoa, asa mora kokoa.
2. Famahanana horonan-taratasy jumbo-lamba mandeha ho azy sy singa EPC, miorina, tsotra ary mora amin'ny asany.
3. Rafitra fanaraha-maso servo import ho an'ny fanapahana marina sy haingana.
4. Ampiasaina amin'ny fanapahana vy vita amin'ny alika avo lenta, izay manana tombony toy ny fitehirizana ny hafanana tsara, ary ny fiainana maharitra.
1 MODELY CSJ-1350
2 Max sakany fanapahana 1350mm
3 Ny halavan'ny fanapahana ≥150mm
4 Fanapahana mazava tsara ± 2mm
5 Hafainganana famahanana lamba 45m / min
6 Mamokatra fahaiza-manao 15-20pc / min
7 Savaivony boribory lehibe 800-1350mm
8 Savaivony lamba 1000mm
9 Haben'ny lavaka "O" 250-550mm
10 Haben'ny lavaka "+" 250-550mm
11 Fanaraha-maso ny mari-pana 0-400 degre
12 Herin'ny motera 8KW
13 Zintin'aratra 380V 3phase 50Hz
14 Rivotra voafintina 6Kg / cm²
15 Fametrahana habe 7500Lx1900Wx1600H mm
Natao ho an'ny lamba jumbo kitapo samy hafa nanapaka toy ny, lamba Jumbo lay-fisaka / lamba fisaka roa, kitapo Jumbo lamba iray sosona, fonosana ambany Jumbo Bag, fonony ambony, lamba vava ambony.
Miaraka amin'ity masinina voafintina sy voafintina ity, azonao atao ny mametraka sombin-damba polypropylene sy haben'ny spout maniry. Fitaovana fanapahana ny halavany sy ny lavaka koa azo ampiasaina isan-karazany.
Alohan'ny hanombohana ny fizotrany, ny mpandraharaha iray dia tokony hametraka ny haben'ny hakana fanapahana loaka. Tokony ahitsy ny toerana misy ny lavaka. Ny foiben'ny singa holing dia ataon'ny vondrona fanaraha-maso. Rehefa avy nametraka ny halavany notapahina dia mandeha ho azy ny fandidiana mandra-pahatongany amin'ny habetsaky ny programa.
Mety mila manitsy ny fotoana ianao, ny faharetan'ny fanodinana ary ny hafanan'ny hafanana arakaraka ny hatevin'ny lamba. Ny fametrahana azy dia atao tanana. Misy unité stacking mandeha ho azy azo isafidianana.
Teo aloha: Masinina fanamafisam-peo manapaka ny ultrasonia ampiasaina amin'ny Circular Loom
Manaraka: Masinina fanapahana lamba FIBC ho an'ny kitapo jumbo CSJ-2400
Masinina manapaka lamba vita amin'ny lamba ho an'ny kitapo lehibe Jumbo
Masinina fanapahana kitapo fiara vaventy Auto Fibc Jumbo
Fibc Auto manamarika fanapahana sy miloloha milina
Masinina fanapahana spout Fibc
Masinina fanapahana lamba FIBC ho an'ny kitapo jumbo ...